Resaky ny mpitsimpona akotry : fanararaotra ny fotoana andraisana vahiny | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : fanararaotra ny fotoana andraisana vahiny
Par Les Nouvelles sur 08/07/2016
Anjaran’ny Antenimieram-pirenena no misantatra ny fampiantranoana fihaonambe iombonana firenena samy hafa. Eto Antananarivo no hivory ny Antenimieran’ny Parlemantera mampiasa teny Frantsay. Santatra ambava-rano io fa ny manetsabe mbola ho avy. An’isan’izany ny Fivoriana an-tampony ao amin’ny OIF. Tsy vahiny amin’ izany andraikitra izany na ny Filohan’ny Antenimiera Jean Max Rakotomamonjy na ny depiote ao. Hain’ny Antenimireampirenena, efa samy za-draharaha amin’izany fifaneraserana amin’ny olona tompom-pahefana ambony any ivelany. Tsy tokony hionona amin’ny fahaizana mifampikasoka amin’ny vahiny fotsiny, fa mendrika ho hararaotina izao fotoana izao hampisehoana ny tena maha izy azy ny solombavambahoaka Malagasy. Malaza izy ireto fa sarotra fehezina. Rariny izany satria amin’ny maha solontena voafidy azy dia ao anatin’ny adidy fanajan-dalàna izy sy ny vahoaka ihany no mifampifehy.
Eo izao ny fitazan’ireo parlementara avy any ivelany mitovy saranga, hanatrimaso ka afaka hijoro vavolombelona amin’ny filazana fa manaja ny hasina repoblikana ny Malagasy. Izany hoe samy masina an-taniny ny andrim-panjakana roa tonta ao anatin’ny fizarana adidy mifandanja. Tsy zava-baovao akory izany, ary raha ny zotra nodiavin’ny volavolan-dalàna mikasika ny serasera ohatra dia efa nijoro amin’ny maha izy azy ny Antenimierampirenena, nampahafantarin’ireo solombavam-bahoaka fa tsy miraika amin’ny fandodonana izy ireo ary mila fotoana handinihana ity volavolandalàna mifehy ny fahafahana eo amin’ny sehatra famosahana hevitra sy fitanteram-baovao ity. Antenaina noho izany fa raha mbola toy izao tazana izao aza ny faneriterena amin’na fiantsona fivoriana tsy ara-potoana dia tsy vonona kosa izy aty eo amin’ny fandinihana sy fandaniana lalàna hanefa ny andraikiny ao anaty adi-koropaka fa mbola handinika lalina an’ilay volavola alohan’ ny fangalana fanapahana. Na amin’ny fitondrana fanitsiana, na amin’ny fandanina manta izay vaosoratra, na amin’ ny fitsipahana tsotra ilay tolotra.
Aiza dia ny mpanao gazety izay nampiseho faharetana na efa tsindrin-daona aza niandry 20 taona no ampangaina indray ho tsy mahafantatra izay tena tadiavina fa be sitrapo toy ny ankizy mitranga mihemotra toy ny lelon-jaza. Na olona ambony sy olon-tsotra aza samy olon-dehibe ka mety no mifanaja, hitsikitsika tsy mandihindihy foana fa ao raha.